TPLF misery coming soon to Oromiyaa. They are trying to stop Qeerroo from any movement. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTPLF misery coming soon to Oromiyaa. They are trying to stop Qeerroo from any movement.
TPLF misery coming soon to Oromiyaa. They are trying to stop Qeerroo from any movement.
Oduu_Gammachiisaa: Ittigafatamaan Basaastoosa Wayyaanee Kan Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Dambi Dolloo Torbaan Muraasaan Duraa Qeerroo Oromiyaatiin Haleelameera!
Yeroo darbee irra deddeebi’iin ittigafatamaa fi qindeessaa basaastota kanaa (Maqaan isaa Endalew jedhamuu), karaa tooraa facebook fi karaa keessoon qeerroowwaan oromiyaaf , irra jireessaan Abbaa Torbee godiinaa qelleem wallaggaaf kan qoodaa turee yoo ta’uu, yeroo muraasaaaf tarkaanfiin irraatti fudhatamuuf milquu yaalaa tureera.
Darbees ammo qamaa Security_Wayyaanee INSA jedhamuu waliin tumsuun eenyummaa koo bira ga’uuf ammoo tattaaffachaa akka turaan isiniif eerera. Cinuma dubbii kanaan, kallattii kamiin iyyuu na qabuu akka hin dandeenye eeraafii (ibsaafii) tureera.
Dubbiin isiif qooduuf fedhetti yeroon deebi’uu: Basaasaan kun imala inni godinaa kanaa alatti gochuun miliquuf yaaleetti fufuun, Qeerroo Oromiyaatiin tarkaanfiin itti fudhatameen, rasaasaan haleelamuun gara Finfinneetti haleellaan kun gurraa ummaata utuu hin ga’iin yaaliif fidanii turaan. Namtichi kun guyyoota muraasaaf sadarkaa hamaa irraa kan turee yoo ta’uu, ammaan kana Miillii_isaa_innii_mirgaa_Paralized ta’ee jira.
Tarkaanfiin kuniis kan fudhatamee torbaan sadii (3) lakkoofsiisuuf deema jira. Haala barbaachisummaa isaa irratti hundaa’uun eessaatti akka rukutamee, eenyunii fi haala akkamiin akka rukutamee, Finfinnee keessaa eessaatti akka yaalamaa turee fi jiru, akkasumaas mana jireenyaa isaa fi kanneen biroo kanaan isiif maxxaansuu ta’a.
Qeerroo Oromiyaa irraa!
+++Qindeessaan oduu kanaa, qeerroo karaa bilbilaan basaasaa kanaaf of beeksisaa tura dha.
Ethiopia clarifies it will not release all political prisoners